Ny fototry ny atidoha: ny rafitra valisoa dia mitondra ny fitondran-tenantsika | Valin'ny Fanamarinana
Home Brain Basics Valin'ny valisoa
Mba hahatakarana ny antony antony itarihan'ny sakafo matsiro, ny fitiavana feno fitiavana, ny faniriana ara-nofo, ny toaka, ny heroin, ny pôrnôgrafia, ny sôkôla, ny filokana, ny media sosialy na ny fividianana amin'ny aterineto, dia mila mahafantatra momba ny rafitra valisoa isika.
The valisoa dia iray amin'ireo rafitra lehibe indrindra ao amin'ny ati-doha. Izy io dia mitarika ny fitondran-tenantsika mankany amin'ny fanentanana mahafinaritra toy ny sakafo, firaisana ara-nofo, alikaola sns. Ary manalavitra antsika amin'ireo maharary (fifandonana, enti-mody sns) izay mila angovo na ezaka bebe kokoa. Eo no ahatsapantsika ny fihetsem-po sy hanodinana ireo fihetsem-po ireo hanombohana na hampiatoana ny hetsika. Izy io dia misy vondrona firafitry ny ati-doha ao amin'ny ati-doha. Mandanjalanja izy ireo raha mamerina fihetsika iray na tsia na mamorona fahazarana. Ny valisoa dia fanentanana izay mitarika faniriana hanova fitondran-tena. Matetika ny valisoa dia mpanatanjaka. Izany hoe izy ireo dia mahatonga antsika hamerina fihetsika izay hitantsika (tsy fahatsiarovan-tena) fa tsara ho an'ny fahavelomantsika, na dia tsy izany aza. Ny fahafinaretana dia valisoa na fanentanana tsara kokoa noho ny fanaintainana amin'ny fitondran-tena manentana. Ny karaoty dia tsara kokoa noho ny tapa-kazo sns.
Ao afovoan-dalan'ny valisoa dia ny striatum. Ny faritry ny ati-doha no mamokatra fahatsapana valisoa na fahafinaretana. Amin'ny fomba mahomby, ny striatum dia mandrindra ireo lafiny maro amin'ny fisainana izay manampy antsika handray fanapahan-kevitra. Anisan'izany ny fandrindrana ny hetsika sy ny asa, ny antony manosika, ny fanamafisana ary ny fahatsapana valisoa. Eo no mandanja ny lanjan'ny stimulus ao amin'ny nanosecond ny ati-doha, mandefa signal 'go for it' na 'hijanona'. Io ampahan'ny ati-doha io dia tena miova tokoa vokatry ny fitondran-tena mampiankin-doha na aretin-ketroka. Ny fahazarana izay nanjary rut lalina dia iray amin'ny fianarana 'pathological', izay fianarana tsy voafehy.
Ity dia lahateny fohy TED momba ny resaka The Pleasure Trap.
Ny anjara asan'ny Dopamine
Inona ny anjara asan'ny dopamine? Dopamine dia neurochemical izay miteraka fiasa ao amin'ny ati-doha. Io no iasan'ny rafitra valisoa. Manana lahasa isan-karazany izy io. Dopamine no neurochemical 'go-get-it' izay mitarika antsika hanana aingam-panahy na valisoa ary fitondran-tena ilaintsika mba hahavelomantsika. Ohatra amin'izany ny sakafo, ny firaisana ara-nofo, ny fatorana, ny fisorohana ny fanaintainana sns. Izy io koa dia famantarana iray mampihetsika antsika. Ohatra, ny olona voan'ny aretina Parkinson dia tsy mahavita dopamine ampy. Miseho ho hetsika mihetsiketsika io. Ny fihanaky ny dopamine 'manamafy' ny lalan-neural mba hahatonga antsika te-hamerina fihetsika iray. Izy io dia singa iray lehibe amin'ny fianarantsika zavatra.
Tena mandanjalanja tsara ao amin'ny ati-doha. Ny teoria lehibe momba ny andraikitry ny dopamine dia ny mandrisika-salience teoria. Mikasika ny faniriana fa tsy tiana. Ny fahatsapana fahafinaretana dia avy amin'ny opioid voajanahary ao amin'ny ati-doha izay miteraka fahatsapana hafaliana na avo. Ny dopamine sy ny opioid dia miara-miasa. Ny olona voan'ny schizophrenia dia mazàna manana famokarana dopamine be loatra ary mety hiteraka tafiotra ara-tsaina sy fientanam-po tafahoatra. Mieritrereta Goldilocks. Balance. Ny fibanjinana sakafo, alikaola, zava-mahadomelina, pôrnôgrafia sns dia manamafy ireo lalana ireo ary mety hiteraka fiankinan-doha amin'ny sasany.
Dopamine sy Pleasure
Ny habetsahan'ny dopamine navoakan'ny atidoha alohan'ny fihetsika dia mitovy amin'ny fahafahany manome fahafinaretana. Raha mahatsapa fahafinaretana amin'ny votoaty na ny asa atao isika, ny fahatsiarovan-tsofina dia midika fa mihevitra isika fa mety ho mahafinaritra indray izany. Raha manitsakitsaka ny zavatra antenaintsika ilay mpanohitra, dia mahafinaritra kokoa na tsy mahafinaritra izany - dia hamokatra dopamine fohy kokoa na latsa-danja araka ny tokony ho izy ny fihaonantsika manaraka. Ny zava-mahadomelina dia manaisotra ny rafitra valisoa ary mamokatra ambaratonga ambony amin'ny dopamine sy opioids amin'ny voalohany. Rehefa afaka fotoana fohy dia nampiasain'ny atidoha ny saina, noho izany dia mila dopamine bebe kokoa ny hahatongavana ambony. Miaraka amin'ny zava-mahadomelina dia mila zavatra hafa ny mpiserasera, saingy amin'ny pôrnô sy ny fijerena sary vetaveta, ny atidoha dia mila vaovao, samy hafa sy manaitra ary mahagaga mba hahazoana ny avo.
Mpampiasa iray manenjika hatrany ny fahatsiarovana sy ny zavatra niainany tamin'ny avo euphoric voalohany, saingy matetika diso fanantenana izy. Tsy afaka mahazo tsia… .Fahafaham-po. Ny mpampiasa iray koa dia mety, rehefa afaka kelikely, 'mila' ny pôrnôgrafia na alikaola na sigara, hijanona ho lohan'ny fanaintainana ateraky ny dopamine ambany sy ny soritr'aretina fanesorana trotraka. Noho izany ny fihodinan'ny fiankinan-doha. Ao amin'ny olona iray manana fampiasana zava-mahadomelina na fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena, ny 'faniriana' hampiasaina, ateraky ny fihenan'ny haavon'ny dopamine, dia mety hahatsapa ho toy ny filan'ny velona 'maty na fahafatesana' ary mitarika amin'ny fanapahan-kevitra tsy dia tsara loatra hampijanonana ny fanaintainana.
Ny loharanon'ny dopamine ao amin'ity faritra afovoan'ny ati-doha (striatum) ity dia novokarina tao amin'ny faritra tegmental ventral (VTA). Avy eo dia mankany amin'ny nucleus accumbens (NAcc), ny ivon-karama, ho setrin'ny fahitana / famantarana / fiandrasana ny valisoa, mampiditra ny saika vonona hanao hetsika. Ny hetsika manaraka - hetsika moto / fivezivezena, ampandehanan'ny fambara manaitaitra 'go get it', na famantarana manakana, toy ny 'stop', dia ho faritana amin'ny alàlan'ny cortex prefrontal raha vantany vao nahavita ny vaovao izy. Arakaraka ny habetsaky ny dopamine ao amin'ny ivon-karama, no vao mainka mahatsapa ny fanentanana ho valisoa. Ireo olona manana aretina tsy azo fehezina, na fiankinan-doha, dia mamokatra fambara malemy loatra avy amin'ny korteks prefrontal mba hanakanana ny faniriana na fihetsika tampoka.
<< Neurochemicals Atidoha adolescent >>